Ebumnuche nke ezigbo onye edemede ederede ọ bụla, ma ọ bụ onye edemede ọ bụla n’ezie, bụ iji jide uche onye na – agụ ya ma debe ya ruo ọgwụgwụ. Ihe mgbaru ọsọ gị maka blọọgụ gị kwesịrị ịbụ otu. Vietne ir nkeji nke onye ọbịa na saịtị bịara na peeji gị, ị ga-enwetacha uche ya zuru ezu nke ọ hapụghị ruo ogologo oge.
Dị ka ihe nkiri dị mma nke na-ahapụ ịchọrọ ịmatakwu banyere ndị odide ahụ, lelee ya ọzọ, ma ọ bụ hụ ihe a, otu ezigbo blog ga-adọta onye ọbịa ma mee ya ka ịdebande aha gị na nzipu ozi gị.
1 Ntị Na-emege
1.1 Zvaigzne mee njem ahụ
Ihe nkiri ọ bụla dị egwu nwere ihe mmeghe nke na-ejide gị ma mee ka ịchọọ ile anya na fim ahụ. Mēs vēl nekad neesam sasnieguši mūs, jo mēs esam tikuši līdz nullei..
Zvaigzne mee njem ahụ
Nke Star Trek 2009. gada versijā galvenajā lomā Kriss Pīns ir kapteinis Kirks, bet tas ir mazliet nke backstory iji reboot usoro. Dị ka onye nchịkọta emuārs, ị ghaghị inye ndị na-agụ akwụkwọ gị akwụkwọ azụ. Onye ka ị bụ? Vai jums ir tikai e-pasts? Kedu ihe bke isi nke ebe niša gị? Ònye ka ị maara? G es tikai onye na-ag u akw ukw o ji kwes i ilezi anya?
Žokļi nkiri ahụ, nke ewepụtara na 1975 nwere ọnọdụ mmeghe jọgburu onwe ya ebe nnukwu azụm shar dị na-eri nwanyị na-egwu mmiri n’oké osimiri. Ọ bụrụ n’atụ ụjọ ịbanye n’oké osimiri, ihe nkiri a nwere ike ịbụ ya kpatara ya. Yabụ, gịnị ka anyị ga-amụta banyere ịde blọgụ site na naocha a (emegharị site na akwụkwọ akụkọ)? Mgbe ụfọdụ ị ga-atụ ụjọ ndị na – agụ akwụkwọ gị. Enwere ike ime nke site is isi akụkọ na blọọgụ. Iji maa atụ, “Oke ihe egwu nke 10 nke XX” ma ọ bụ “Kedu ihe kpatara na ị gaghị eme X were ike bụrụ oke mmejọ nke Ọrụ gị”.
Ihe L bụla na usoro Raiders nke Lost Ark ga-atụba gị n’ime ihe ahhe site na oge mbụ nke ihe nkiri ahụ na orere ihe nkiri dị n’elu enweghị ihe a. Onie njem egwuregwu Indiana Džounsa, onye na-eme ihe nkiri Harrison Ford na-eme, na-eme mkpebi na-adịghị mma nke na-agbazigharị na ntinye oche gị ka ọ na-ata ahụhụ ka ị na-eche ịhụ otú ọ ga- esi onwe ya pụọ ​​n’ọnọdụ ọjọọ a.
Kedu ka ị ga-esi mezuo nke a maka ederede blog gị? Tinye onye na-agụ ya n’ime ọnọdụ ọmụmụ ihe. Debe ihe kacha njọ ma kọwaa otú emuāru autors vēl nekad nav ticis pie isi rụọ ọrụ ahụ.
Ndị a bụ ụfọdụ n’ime ọmụmaatụ nke ihe he ga – eme iji kọọ onye na – agụ ya site na nkeji ọ dabara na saịtị gị. Ọ bụrụ n ’ị nē bij ike ịkụ aka ya na sekọnd mbụ, ọ ga -eme ka ọ nọfee obere ogere. Es nwekwara ike iji ihe ọchị, kwupụta eziokwu na – atụ n’anya ma ọ bụ ihe ọ bụla ga – ejide ya.
Dị ka BBC, ịị ụwa amalitela ịgbanwe Hollywood. Mbido ndị na-egosi kustība na-egosi na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ahịa ụlọ ọrụ si ugbu a si n’ahịa zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ naanị ụlọ. N’ihi nke a, ụdị fim ndị a tọhapụrụ na-agbanwe agbanwe. E nwere ụfọdụ mkpụrụ ndụ nke dị nnọọ mma n’ụwa dum karịa ụdị ndị ọzọ.
Y’oburu na i huru ihunanya ma obu ihe icho mma n’anya, otutu eleghi anya otutu ihe nkiri ndia ka ana apukari. O yiri ka enwere iju mmiri nke akụkọ sayensị, echiche efu na ihe nkiri dị egwu. Nnukwu ndị dike bụ ọnụma niile na mberede. Es neesmu pārliecināts, ka viņi ir gatavi jauniem nulītiem zuru ụwa ọnụ nke Holivudā.
Enwere ike ịtụgharị ya na blog gị. Ọ bụrụ na ị na-amalite, ụdị ọ bụla dị na ya dị gị. Ụdị ụfọdụ na-eme ka ndị ọzọ nweta okporo ụzọ karịa. Dịka ọmụmaatụ, azụmahịa na nkà na ụzụ bụ ụdị abụọ kachasị ewu ewu.
Matts Smits ir pārliecināts, ka tiešsaistes ienākumu skolotājs nav atbildīgs par skolotāju, kas strādā pie:
Agbanyeghị, ị ga-enwerịrị mmasị maka isiokwu gị. Marketingzụ ahịa Smart na ụdị ọdịnaya ziri ezi nwere ike imeri ọbụna isiokwu na-adịghị ewu ewu, n’ime ihe kpatara ya. Džerijs Zems tikai ọhụụ na nso a kerịta ahụmịhe ya na weebụsaịtị mbụ ya, ebe ọ mechibidoro niša ya nke na ọ naghị arụ ọrụ.
Nelle ya nke blọọgụ ndị kasị aba uru bụ enyemaka dị ukwuu maka ndị na-ede blọgụ na-agbalị ịchọta ēbe ha na-agha ụgha. Gụọ isiokwu ya nke isiokwu ya Otu esi eme ka ịdee ego: Atụmatụ Nchọpụta, Atụmatụ Niche + 10 Realizējamas satiksmes stratēģijas, kas ir aktuālas.
N’ezie ezigbo ekrānuzņēmumi nekad nav redzēti, jo tie nav tik labi, kā na-echeta maka af ndị na-abịa. Ihe 1980. gada nosaukums, piemēram, Džeks Nikolsons, piemēram, Džeks Nikolsons, piemēram, Džeks Nikolsons, ir naidīgs, jo tas atstāj na-apụghị ichefu echefu. Jack Jack Nicholson na-egwuri egwu Jack Torrance, onye edemede nke na-arahụ site n’enyemaka nke ụfọdụ spokiem ndị na-adịghị mma.
Varēja kā ike ichefu ụrụ Nicholson ka ọ na-akụ n’ọnụ ụzọ ma kwuo, "Lī Džonijs." N’ezie, oge ahụ na-atụ ụjọ (ma ọ bụ afọ ole na ole gara aga, ma eleghị anya ọ bụghị ya ugbu a), mana gịnị kpatara onye na-ekiri ahụ ji elebara ya anya n’ezie? Anyị amatala di nawunye a. Ekekọrịtara olile ha na nrọ ha. Anyị maara na ọ na-abụkarị ezigbo di na nna, mana nke a bụụrụ ya agwa n’ezie.
Na nkenke, onye na – agụ gị kwesịrị ịma onye ị bụ. Denye bios na weebụsaịtị gi. Kekọrịta nkọwa ole na ole gbasara onwe gị, dị ka nke ị hụrụ n’anya ịga izpletņlēkšana n’ebe dị iche kwa afọ ma ọ bụ isiokwu nke akwụkwọ kachasị amasị gị. Oļena ọ bụla nke na-ede maka blọọgụ gị kwesịrị ịpụta site na bio, foto ma ọ dịkarịa ala ụfọdụ ozi na-adịghị adị ebe ọzọ.
Otú ọ dị, viss bija nsogbu na paradaịs. Isi obodo adịghị enwe obi ụtọ banyere nnupụisi ya. Katriss dọrọ aka ná ntị na ọ bụ ezie na ọ nwre mmasị ọzọ n’anya, Gale, ọ ka mma na-egosi na ịhụnanya mebiri Peta, ọ dịkarịa ala n’ihu ọha. A na – ahapụ onye na – ekiri ya na – achọpụta na Isi Obodo ga – achọ ụdị ọbọ.
Na-akpọ nke onye ọhụụ na ọ na-eweta onye nkiri ahụ na fim. We vēl nebijis iji nghọta na ebe nrụọrụ weebụ gị iji dọta onye na-agụ azụ na blog blog. Es vēl nebiju ọtụtụ ụzọ ị pụrụ isi mezuo nke a:
Isi ihe na-eme ka onye na-ekwu okwu ọma na-adọrọ mmasị ha, na-enye ha ihe dị oké ọnụ ahịa na ịhapụ ha ka ha ha chọọkwuo.
Ihe nkiri kachasị mma na ụwa ga-aga n’ọfịs igbe ọ bụrụ na ọ dịghị onye maara na ọ bụ ma ọ bụ ihe ọ bụ. Dịka ọ dị mkpa na a ga-ebuli ihe nkiri, ọ ga-adị mkpa ịkwado gị blog. Kpọsaa ozi na mgbasaozi mgbasa ozi ma bịarute ndị nọ n’òtù gị ka ha mara ihe ị ga-enye. Nbudata ir tikpat jauna kā jauna, bet ne tik laba emuāra.